Farmaajo oo la kulmay Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika. | Sagal Radio Services
Safarka wafdigan ayaa ku saleysan qiimeynta xaaladda amni iyo dhaqaale ee dalka, iyaga oo ku guda jira diyaarinta cilmi baaris ku saabsan iskaashiga amniga iyo isdhax galka dhaqaale ee dalalka kulaala badda cas iyo gacanka cadmeed.
Thabo Mbeki iyo wafdigiisa ayaa uga mahadceliyey Madaxda Dowladda Soomaaliya soo dhaweynta diirran iyo martiqaadka wanaagsan ee loo fidiyey, iyagoona bogaadiyey dadaallada dib u heshiisiineed ee laga wado dalka, kobaca dhaqaalaha iyo horumarka dhanka siyaasadda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la wadaagay wafdigan dadaalladda ay ka qeyb qadanayso Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku aaddan xoojinta amniga, kobcinta iskaashiga dhaqaale iyo xal u helista caqabadaha siyaasadeed ee dalalka Geeska Afrika ka jira.
Muddo labo ciisho ah ayuu qaadanayaa socdaalka wafdigan waxa ayna kulammo la qaadan doonaan masuuliyiin ka tirsan Goleyaasha Dowladda iyo xeeldheerayaasha Soomaaliyeed ee arrimaha amniga iyo siyaasadda.